I-Soundcore Liberty 3 Pro yenye indlela entsha ene-ANC kunye nenkcazo ephezulu | Iindaba zegajethi
I-Soundcore Liberty 3 Pro yenye indlela entsha ene-ANC kunye nenkcazo ephezulu
UMiguel Hernandez | 05/11/2021 13:00 | Izixhobo, elektroniki, ngokubanzi, Reviews
Isandi yinkampani yokumamela eye yaziseka kweli candelo lidlakadlaka ngokwenza iimveliso ezikumgangatho ophezulu, njengoko kunjalo nakwezinye ebesihlalutya apha kwiiNdaba zeGajethi zesimbo seCambridge Audio okanye iJabra. Ke siyehla kwishishini ngoku nge-Soundcore.
Sijonga nzulu kwi-Liberty 3 Pro entsha evela kwi-Soundcore, i-TWS i-headphones kunye ne-ANC kunye ne-Hi-Res yomsindo eya kubavuyisa abasebenzisi. Fumanisa nathi ukuba iSoundcore Liberty 3 Pro igqame njani kwaye ukuba ngokwenene ziyazifeza zonke ezo zithembiso.
2 Iimpawu zobuGcisa kunye ne "Golden Sound"
3 Ukurhoxiswa kwengxolo ngokwezifiso kunye ne-app
4 Ukuzimela kunye neenkcukacha zemveliso ye "premium".
Ezi Liberty 3 Pro zinoyilo olwahlulahlulo kwaye yinto exatyisiweyo kwimarike yee-headphone ze-TWS apho ezinye zibonakala ngathi ziikopi ezithe ngqo zabanye. Kule meko, i-Soundcore izinikele ngamandla kuyilo lokwahlula kwimeko yayo, oku kujongeka ngathi "ibhokisi yepilisi" evula ngokutyibilika phezulu kwaye ijongeka ilungile. Ngokuphathelele imibala, sinokukhetha umhlophe, uluhlaza okwesibhakabhaka, i-lilac kunye nomnyama. Banoluhlu lweerubha ezijikelezayo eziziqhelanisa nendlebe yethu, ukuze zingawi kwaye zifake i-insulate ngokuchanekileyo. Konke oku ngaphandle kokulibala ukuba ngokwenene sijongene nee-headphones ezingaphakathi, oko kukuthi, zifakwe endlebeni.
Umxholo wephakheji: Ii-headphones + ii-silicone ezisibhozo ze-ear pads + 3 ii-refill zangaphandle + ityala lokutshaja + intambo yokutshaja.
Ubungakanani bemeko kunye nobunzima: 7,1 x 5,5 x 2,7 cm kunye ne-45 grams
Ukuba uyazithanda ungazithenga ngexabiso elifanelekileyo kwiAmazon
Ngale ndlela, kunye noyilo lwabo, bavumela ukujikeleza komoya ngenkqubo enciphisa uxinzelelo ngaphakathi kwendlebe kwaye yenza ukusetyenziswa kwansuku zonke kukhululekile. Sinamanqaku amathathu okubambelela e-ergonomic, "isiphelo" phezulu, irabha esezantsi kunye nokubamba okwenzeka nge-silicone pad. Uyilo oluphazamisayo kwaye bakhululekile.
Iimpawu zobuGcisa kunye ne "Golden Sound"
Ngoku siya kwi-technology kuphela. Zenziwa ngekhamera yangaphambili kunye nesakhiwo esivumela ukunciphisa ubungakanani kunye nokuphucula i-frequencies yesandi. Ikwabandakanya umqhubi wezixhobo kwaye ekugqibeleni umqhubi onamandla we-10,6-millimeter. Ngaloo ndlela isebenzisa i-ACAA 2.0 iteknoloji yesandi se-coaxial kunye nokucinywa kwengxolo esebenzayo ngokusebenzisa inkqubo yokwenza ngokwezifiso kuquka ii-microphone zangaphakathi.
Iikhowudi zomsindo ezixhaswayo yi-LDAC, AAC kunye ne-SBC, ngokomgaqo siza kuba nesandi esinesisombululo esiphezulu nangona zingahambelani nomgangatho we-aptX kaQualcomm. Kufuneka kwakhona kuqatshelwe ukuba zizimeleyo ezizimeleyo zee-headphones ezingenazintambo, siya kukwazi ukuzisebenzisa ngokwahlukileyo ngaphandle kwengxaki.
Sinayo le ndlela isandi esenzelwe wena nge-HearID inkqubo kunye nesandi esijikelezayo kwimilinganiselo emithathu. Njengoko sisazi ukuba usafuna ukwenza umthambo kunye nabo, awunakuphoswa ukuxhathisa okuqinisekisiweyo kwamanzi IPX4 eya kusombulula uninzi losetyenziso esinokululindela. Asinalo ulwazi olupheleleyo kwi-hardware yangaphakathi ngokubhekiselele kunxibelelwano, siyazi ukuba yiBluetooth 5 kwaye i-codec ye-LDAC ekhankanywe ngasentla ivumela ukuba sifikelele kwisandi se-Hi-Res, oko kukuthi, ngedatha ephindwe kathathu ngaphezu kwefomathi yeBluetooth eqhelekileyo. . I-Anker Soundcore ...
Ukurhoxiswa kwengxolo ngokwezifiso kunye ne-app
Iimakrofoni ezithandathu ezidibeneyo kunye ne-Artificial Intelligence zenza ukucinywa kwengxolo yezi Liberty 3 Pro ilunge kakhulu kwaye siye sakwazi ukuyixabisa kwiimvavanyo zethu. Ngaphandle kwayo yonke le nto, sinokusebenzisa iindlela ezintathu ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwizinto esizithandayo kunye neemfuno. Babize ntoni I-HearID ye-ANC ichonga inqanaba le-acoustic langaphandle nangaphakathi endlebeni, ngoko ke sinokuhlengahlengisa amanqanaba amathathu okurhoxiswa kwengxolo ukusuka kwelona lisezantsi ukuya kwelona liphezulu ngokuxhomekeke kuhlobo lwengxolo esiyibonayo. Konke oku ngaphandle kokulibala "imowudi ecacileyo" yentsomi esingakhange sikwazi ukuyivavanya kuba ayibandakanyi kude kube kuhlaziyo olulandelayo, le nkqubo ibizwa ngokuba yiEnchance Vocal Mode.
Kuko konke oku sinesicelo se Isandi (Android / iPhone) ngobuninzi bemisebenzi kunye nojongano oluhle lomsebenzisi. Kwesi sicelo sinokuhlengahlengisa ukusabela kuchuku esilwenzayo kwii-headphones ukuze sinxibelelane nolawulo lwazo lokuchukumisa, kunye nokutshintsha ezinye iisetingi zonxibelelwano kunye nezinto ezikhethwayo kunye nezinye izixhobo. Kwenzeka njani ukuba ngenye indlela, sinenkqubo yokulinganisa esinokudlala ngayo ukuze sigqibe kwelokuba sikhethe uguqulelo lwethu esiluthandayo.
Ukuzimela kunye neenkcukacha zemveliso ye "premium".
Isandi se-Anker sika-Anker asizange sisinike ulwazi oluthile malunga nomthamo webhetri ye-mAh yezi headphones. Ewe bayasithembisa Iiyure ezisi-8 zokusetyenziswa ngentlawulo enye, eziye zehliswa nge-10 ukuya kwi-15 yeepesenti kuvavanyo lwethu kunye nokucinywa kwengxolo kuvuliwe. Sinetotali ye Iiyure ze32 ukuba sibandakanya izityholo zetyala, ngendlela efanayo, siye saba malunga neeyure ezingama-31 zizonke.
Eli tyala lisivumela ukuba sihlawule ii-headphones ukuze kwimizuzu nje eli-15 basinika ezinye iiyure ezintathu zokudlala kwakhona. Kwakhona, ukutshaja kwetyala kwenziwa kusetyenziswa intambo ye-USB-C, kodwa inokuba njani ngenye indlela esinayo ukutshaja okungenazintambo kunye nomgangatho we-Qi kwindawo yayo engezantsi, kunye nee-LED ezintathu ngaphambili ezisazisa ngesimo sokuzimela. Zonke ezi datha ziphucula kancinci ezo zibonelelwa yiLiberty Air 3 Pro kunye neLiberty 2 Pro. Kwinqanaba lokuzimela, ezi Liberty 3 Pro zikwinqanaba leyona nto ibalaseleyo, nangona ubungakanani bazo sele bunike ukholo oluhle lokuba baya kuba nempumelelo ebalaseleyo. kweli candelo .
Siye samangaliswa kakhulu zezi Liberty 3 Pro umgangatho wabo womsindo ococekileyo kunye neenkcukacha apho sinokufumana zonke iintlobo zokuhambelana kunye neefrikhwensi. Ukurhoxiswa kwengxolo kugqwesileyo, zombini ngokuqhubekayo nangokusebenzayo, kwaye ii-microphone zayo ezilungileyo zinike impendulo enkulu kwisidingo sokufowuna okanye ukubamba iinkomfa zevidiyo. Uqhagamshelo lweBluetooth luzinzile kuzo zonke iinkalo. Kuyamangalisa, ewe, ukongezwa okugqithisileyo kwe-bass kunye nokuba ulawulo lokuchukumisa aluphenduli kakuhle rhoqo njengoko besiya kuthanda. Ixabiso layo lijikeleze i-euro ezili-159,99 kwiAmazon kunye newebhusayithi esemthethweni ye Anker.
Inkululeko 3 Pro
Ithunyelwe nge: NgoNovemba 5 ukusuka kwi2021
Utshintsho lokugqibela: NgoNovemba 2 ukusuka kwi2021
Gcwalisa isicelo kunye nokuzimela
I-bass ephuculwe kakhulu
Ulawulo lokuchukumisa ngamanye amaxesha luyasilela
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Soundcore Liberty 3 Pro yenye indlela entsha ene-ANC kunye nenkcazo ephezulu
I-Tronsmart isungula izibonelelo ezikhethekileyo ngoNovemba 11 kunye ne-12 ukuya kuthi ga kwi-70%